ကွန်ပျူတာမဝယ်ခင် စဉ်းစားသင့်သော အချက်များ - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းပညာဗဟုသုတ > ကွန်ပျူတာမဝယ်ခင် စဉ်းစားသင့်သော အချက်များ
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 2:35 AM နည်းပညာဗဟုသုတ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် ဒီလထဲဝယ်ဖို့စဉ်းစားထားရင် ဖတ်ကြည့်လိုက်နော် ..
Laptop တစ်လုံးဝယ်တော့မယ် ဆိုရင် ထည့်စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေကတော့ အများကြီးပါ။ အဲဒီထဲကမှ အခြေခံအကျဆုံးနဲ့ အရင်ဆုံး စဉ်းစားရမယ့် အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ဒီ Laptop ကို ဘာအတွက်သုံးမှာလဲ ဆိုတဲ့အချက်ပါ။
သာမန် စာစီစာရိုက်၊ အင်တာနက်သုံး၊ ဖျော်ဖြေရေး(ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ သီချင်းနားထောင်၊ ဂိမ်းအသေးစားလေးတွေဆော့) နဲ့ ရုံးအတွက် သက်သက်ပဲ သုံးမှာလား ? ဒါဆိုရင်တော့ ထည့်စဉ်းစားရမယ့်အချက်နည်းသွားပါပြီ။ အဲလိုမဟုတ်ဘူး ကိုယ်က ဂိမ်းအမြင့်ကြီးတွေဆော့ချင်တာဆိုရင် ဂိမ်းဆော့ဖို့ သီးသန့်လာတဲ့ Laptop တွေရှိပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် တခြားပညာရပ်ဆိုင်ရာအတွက်အသုံးချမယ် (ဥပမာ – Graphic Design ၊ Video Editing အစရှိသဖြင့်ဆိုရင်တော့) သူ့ပညာရပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အားသာချက်ရှိတဲ့ Laptop တွေကိုဝယ်သင့်တာပါ။ ဒီလို Laptop မျိုးဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေဆီမှာ သေသေချာချာစုံစမ်းလေ့လာပြီးမှ ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးတွေမှ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်က သာမာန်အသုံးပြုသူအနေနဲ့ပဲသုံးချင်တာဆိုရင်တော့ ထည့်စဉ်းစားရမယ့် အခြေခံအချက်လေးတွေရှိပါတယ်။ ဒါတွေက …
ကိုယ်က ဘယ်လောက်အထိ ငွေသုံးနိုင်မှာလဲ ဆိုတဲ့ အချက်က ကနဦး စဉ်စားရမယ့် အချက်ပါ။ လက်ရှိကာလ ၂၀၁၈၊ အောက်တိုဘာလမြန်မာပြည်အခြေအနေနဲ့ဆိုရင် အနိမ့်ဆုံး လေးသိန်းလောက်ကနေ သိန်းဆယ်ချီအထိ ရှိပါတယ်နော်။ Laptop မှာတော့ ကိုယ်ဈေးနည်းနည်းပဲသုံးနိုင်လို့ အပေါစား အညံ့စား သုံးရတော့မှာလားလို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်စရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ်က သာမန်ပဲ သုံးမှာဆိုတော့ Laptop အမျိုးအစားကောင်းထဲက မော်ဒယ်လ်နိမ့်နိမ့်၊ နည်းပညာနိမ့်နိမ့်ကို ဝယ်သုံးလို့ ရပါတယ်။
အများသိတဲ့အတိုင်းပဲ မော်ဒယ်လ်မြင့် (နောက်ဆုံးထွက်) လေလေ ဈေးမြင့်လေလေ၊ ပါဝင်တဲ့နည်းပညာ မြင့်လေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်တတ်နိုင်ရင် မော်ဒယ်လ်မြင့်တာ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုလည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အမျိုးစားကောင်း Laptop တံဆိပ်တွေထဲက မော်ဒယ်လ် နိမ့်တာဝယ်သုံးရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ မော်ဒယ်လ် နိမ့်တာက အရည်အသွေးနိမ့်တာမဟုတ်လို့ စိတ်ညစ်စရာလည်း မလိုပါဘူး။ ကိုယ်က သာမန်အသုံးပြုသူအနေနဲ့ပဲ သုံးမှာဆိုတော့ မော်ဒယ်လ်နိမ့်ပေမဲ့ အမျိုးအစားကောင်းတဲ့ Laptop ဆိုရင် အဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်ပါတယ်။
အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ကိုယ်မမြင်ရတဲ့ Laptop အတွင်းပိုင်း ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကို Laptop အပြင်ဘက်မှာ ကပ်ထားပေးတာမို့ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ အဲဒါတွေကို တစ်ခုချင်းရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်
အသုံးအများဆုံးက Intel ဖြစ်ပြီး သူ့ကိုတော့ Core ဘယ်လောက်ဆိုပြီးရွေးဝယ်လို့ရပါတယ်။ အနိမ့်ဆုံး Core i3 လောက်ကနေ အခုဆို Core i7 အထိ အကြမ်းအားဖြင့် ရွေးဝယ်လို့ရပါတယ်။ ခုဆို Core i9 ထိ ထွက်နေပြီလို့တောင် သိရ ပုံမှန်အားဖြင့် Core i5 လောက်က အတော်ပါပဲ။ ဈေးအများကြီး မသုံးချင်ဘူး၊ ကိုယ်ကသာမန်ပဲသုံးမှာဆိုရင် Core i3 ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
သူကတော့ CPU ကိုအဓိကကူညီပေးတဲ့ ပစ္စည်းလို့ပဲ အလွယ်ခေါ်လို့ရပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ အနည်းဆုံး 4GB လောက်ကစသုံးလို့ရပြီး ပိုများများသုံးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
သူကတော့ Laptop ပေါ်မှာ ကိုယ်သိမ်းထားလိုသမျှ အချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့ ဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို၊ သီချင်း၊ ဖိုင်အမျိုးစုံတို့ကို သိမ်းထားပေးမယ့်ပစ္စည်းပါ။ ဒါတော့ တကူးတကတောင် ပြောနေစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်.. Storage များလေလေ၊ဈေးမြင့်လေလေဆိုတာကတော့ ထုံးစံပေါ့
ကိုယ်က ဒီ Laptop ကို နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်ထက် ပိုမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ လက်ရှိ ကိုယ်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးကို ရွေးဝယ်ရုံနဲ့ ရပါတယ်။ တစ်ခါဝယ်ပြီး တစ်သက်လုံးသုံးချင်တာ ဆိုရင်တော့ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းတွေကို နည်းပညာမြင့်နိုင်သမျှ မြင့်မြင့်ဝယ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းတွေကို နောက်ပိုင်းပြန်လည်အဆင့်မြင့်လို့ရမယ့် အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်တာတွေ ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။
ဒါတွေက Laptop ဝယ်ယူရာမှာ သိထားသင့်တဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အချက်တွေပါ။ တခြားလေ့လာသင့်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့ ဘတ္ထရီ၊ ရုပ်ထွက်၊ အကြမ်းခံမှု၊ ကီးဘုတ်၊ အင်တာနက်၊ အသံထွက် စတာတွေကိုလည်း သေသေချာချာ ရွေးချယ်သင့်ပြီး လိုအပ်ရင် နားလည်တတ်ကျွမ်းသူရဲ့ အကူအညီရယူပါလို့ အကြံပေးလိုက်ပါရစေနော်။
References: laptopmag, pcworld.
[Unicode] ဖွငျ့ဖတျရနျ ဒီလထဲဝယျဖို့စဉျးစားထားရငျ ဖတျကွညျ့လိုကျနျော ..
Laptop တဈလုံးဝယျတော့မယျ ဆိုရငျ ထညျ့စဉျးစားရမယျ့အခကျြတှကေတော့ အမြားကွီးပါ။ အဲဒီထဲကမှ အခွခေံအကဆြုံးနဲ့ အရငျဆုံး စဉျးစားရမယျ့ အခကျြတဈခကျြရှိပါတယျ။ အဲဒါတှကေတော့ ဒီ Laptop ကို ဘာအတှကျသုံးမှာလဲ ဆိုတဲ့အခကျြပါ။
သာမနျ စာစီစာရိုကျ၊ အငျတာနကျသုံး၊ ဖြျောဖွရေေး(ရုပျရှငျကွညျ့၊ သီခငျြးနားထောငျ၊ ဂိမျးအသေးစားလေးတှဆေော့) နဲ့ ရုံးအတှကျ သကျသကျပဲ သုံးမှာလား ? ဒါဆိုရငျတော့ ထညျ့စဉျးစားရမယျ့အခကျြနညျးသှားပါပွီ။ အဲလိုမဟုတျဘူး ကိုယျက ဂိမျးအမွငျ့ကွီးတှဆေော့ခငျြတာဆိုရငျ ဂိမျးဆော့ဖို့ သီးသနျ့လာတဲ့ Laptop တှရှေိပါတယျ။
ဒါမှမဟုတျ တခွားပညာရပျဆိုငျရာအတှကျအသုံးခမြယျ (ဥပမာ – Graphic Design ၊ Video Editing အစရှိသဖွငျ့ဆိုရငျတော့) သူ့ပညာရပျအတှကျလိုအပျတဲ့ အားသာခကျြရှိတဲ့ Laptop တှကေိုဝယျသငျ့တာပါ။ ဒီလို Laptop မြိုးဆိုရငျ သကျဆိုငျရာကြှမျးကငျြသူတှဆေီမှာ သသေခြောခြာစုံစမျးလလေ့ာပွီးမှ ဝယျယူသငျ့ပါတယျ။
ဒီလိုမြိုးတှမှေ မဟုတျဘဲ ကိုယျက သာမာနျအသုံးပွုသူအနနေဲ့ပဲသုံးခငျြတာဆိုရငျတော့ ထညျ့စဉျးစားရမယျ့ အခွခေံအခကျြလေးတှရှေိပါတယျ။ ဒါတှကေ …
ကိုယျက ဘယျလောကျအထိ ငှသေုံးနိုငျမှာလဲ ဆိုတဲ့ အခကျြက ကနဦး စဉျစားရမယျ့ အခကျြပါ။ လကျရှိကာလ ၂၀၁၈၊ အောကျတိုဘာလမွနျမာပွညျအခွအေနနေဲ့ဆိုရငျ အနိမျ့ဆုံး လေးသိနျးလောကျကနေ သိနျးဆယျခြီအထိ ရှိပါတယျနျော။ Laptop မှာတော့ ကိုယျဈေးနညျးနညျးပဲသုံးနိုငျလို့ အပေါစား အညံ့စား သုံးရတော့မှာလားလို့ စိတျမကောငျး ဖွဈစရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယျက သာမနျပဲ သုံးမှာဆိုတော့ Laptop အမြိုးအစားကောငျးထဲက မျောဒယျလျနိမျ့နိမျ့၊ နညျးပညာနိမျ့နိမျ့ကို ဝယျသုံးလို့ ရပါတယျ။
အမြားသိတဲ့အတိုငျးပဲ မျောဒယျလျမွငျ့ (နောကျဆုံးထှကျ) လလေေ ဈေးမွငျ့လလေေ၊ ပါဝငျတဲ့နညျးပညာ မွငျ့လလေေ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့ ကိုယျတတျနိုငျရငျ မျောဒယျလျမွငျ့တာ ဝယျလို့ရပါတယျ။ ကိုယျမတတျနိုငျဘူးဆိုလညျး ကိစ်စမရှိပါဘူး။ အမြိုးစားကောငျး Laptop တံဆိပျတှထေဲက မျောဒယျလျ နိမျ့တာဝယျသုံးရငျ အဆငျပွပေါတယျ။ မျောဒယျလျ နိမျ့တာက အရညျအသှေးနိမျ့တာမဟုတျလို့ စိတျညဈစရာလညျး မလိုပါဘူး။ ကိုယျက သာမနျအသုံးပွုသူအနနေဲ့ပဲ သုံးမှာဆိုတော့ မျောဒယျလျနိမျ့ပမေဲ့ အမြိုးအစားကောငျးတဲ့ Laptop ဆိုရငျ အဆငျပွပွေသေုံးနိုငျပါတယျ။
အရေးအကွီးဆုံးဖွဈပွီး ကိုယျမမွငျရတဲ့ Laptop အတှငျးပိုငျး ပါဝငျပစ်စညျးတှအေကွောငျးကို Laptop အပွငျဘကျမှာ ကပျထားပေးတာမို့ စိတျကွိုကျရှေးခယျြဝယျယူလို့ရပါတယျ။ အဲဒါတှကေို တဈခုခငျြးရှငျးပွရမယျဆိုရငျ
အသုံးအမြားဆုံးက Intel ဖွဈပွီး သူ့ကိုတော့ Core ဘယျလောကျဆိုပွီးရှေးဝယျလို့ရပါတယျ။ အနိမျ့ဆုံး Core i3 လောကျကနေ အခုဆို Core i7 အထိ အကွမျးအားဖွငျ့ ရှေးဝယျလို့ရပါတယျ။ ခုဆို Core i9 ထိ ထှကျနပွေီလို့တောငျ သိရ ပုံမှနျအားဖွငျ့ Core i5 လောကျက အတျောပါပဲ။ ဈေးအမြားကွီး မသုံးခငျြဘူး၊ ကိုယျကသာမနျပဲသုံးမှာဆိုရငျ Core i3 ဆိုရငျလညျး အဆငျပွပေါတယျ။
သူကတော့ CPU ကိုအဓိကကူညီပေးတဲ့ ပစ်စညျးလို့ပဲ အလှယျချေါလို့ရပါတယျ။ သူ့ကိုတော့ အနညျးဆုံး 4GB လောကျကစသုံးလို့ရပွီး ပိုမြားမြားသုံးနိုငျရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။
သူကတော့ Laptop ပျေါမှာ ကိုယျသိမျးထားလိုသမြှ အခကျြအလကျတှဖွေဈတဲ့ ဓာတျပုံ၊ ဗှီဒီယို၊ သီခငျြး၊ ဖိုငျအမြိုးစုံတို့ကို သိမျးထားပေးမယျ့ပစ်စညျးပါ။ ဒါတော့ တကူးတကတောငျ ပွောနစေရာလိုမယျမထငျပါဘူးနျော.. Storage မြားလလေေ၊ဈေးမွငျ့လလေဆေိုတာကတော့ ထုံးစံပေါ့
ကိုယျက ဒီ Laptop ကို နှဈနှဈ၊ သုံးနှဈထကျ ပိုမသုံးခငျြဘူးဆိုရငျတော့ လကျရှိ ကိုယျနဲ့အကိုကျညီဆုံးကို ရှေးဝယျရုံနဲ့ ရပါတယျ။ တဈခါဝယျပွီး တဈသကျလုံးသုံးခငျြတာ ဆိုရငျတော့ အပျေါကပွောခဲ့တဲ့ အတှငျးပိုငျးပစ်စညျးတှကေို နညျးပညာမွငျ့နိုငျသမြှ မွငျ့မွငျ့ဝယျတာ၊ ဒါမှမဟုတျ အတှငျးပိုငျးပစ်စညျးတှကေို နောကျပိုငျးပွနျလညျအဆငျ့မွငျ့လို့ရမယျ့ အမြိုးအစားကိုရှေးခယျြတာတှေ ပွုလုပျလို့ရပါတယျ။
ဒါတှကေ Laptop ဝယျယူရာမှာ သိထားသငျ့တဲ့ အရေးအကွီးဆုံး အခကျြတှပေါ။ တခွားလလေ့ာသငျ့တဲ့အခကျြတှဖွေဈတဲ့ ဘတ်ထရီ၊ ရုပျထှကျ၊ အကွမျးခံမှု၊ ကီးဘုတျ၊ အငျတာနကျ၊ အသံထှကျ စတာတှကေိုလညျး သသေခြောခြာ ရှေးခယျြသငျ့ပွီး လိုအပျရငျ နားလညျတတျကြှမျးသူရဲ့ အကူအညီရယူပါလို့ အကွံပေးလိုကျပါရစနေျော။
ကွန်ပျူတာမဝယ်ခင် စဉ်းစားသင့်သော အချက်များ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 2:35 AM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် ဒီလထဲဝယ်ဖို့စဉ်းစားထားရင် ဖတ်ကြည့်လိုက်နော် .. Laptop တစ်လုံးဝယ်တော့မယ် ဆိုရင် ထည့်စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေကတော့ အ...